जसरी असललाई मण्डप र खराबलाई जेलको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ, चिकित्सा लगायत हरेक पेसामा त्यो आवश्यक छ। तर समग्र पेसालाई मन पर्दा देवत्वकरण वा चित्त नबुझ्दा दानवीकरण गरिनु हुँदैन
म आवासीय चिकित्सक भएर काम गरेको यस्तो अस्पताल छ, जहाँ दुईथरी मान्छे आउछन्। एकथरी, त्यस संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीका आफन्त, जो भनसुनले हालीमुहाली गर्न सक्छन्। दोस्रोथरी, कहीँकतैबाट उपचारको आस गर्न नसक्ने, सामाजिक र आर्थिक रुपमा अत्यन्त विपन्न।पहिलो वर्गको उपचारमा त केही कसर बाँकी रहँदैन तर दोस्रो वर्गलाई निको पार्न धेरै तिकडम गर्नुपर्छ। अलि हुनेखानेको अप्रेशनबाट बचेको सामान भेला गरेर दोस्रोको जीवनदानमा प्रयोग गरिन्थ्यो। फेसबुकमा विज्ञापन राखेर आर्थिक स्रोत जुटाएर पनि केहीलाई बचाइयो। कानुनतस् हुनेखानेको बचेको सामान फिर्ता नगरी लुकाएर अर्को बिरामीलाई प्रयोग गर्नु चोरी नै होला। अलि एड्भेन्चर वा सम्मानको भाषामा मेडिकल रबिनहुड भन्दा फरक नपर्ला। परिणाम वा उद्देश्य सही भए पनि नभए पनि त्यो एकखाले नैतिक सम्झौता नै हो। मेडिकल अफिसर हुँदा अस्पतालको अराजक सर्त नमान्ने सर्तमा काम गरे पनि निजी अस्पतालको जागिर केही सम्झौतामूलक नै हुने गर्छ। एक अस्पतालको अर्को अनुभव सुनाउँछु ।फार्मेसीमा सधैं एउटै एन्टिबायोटिक लेखिदिनु है डाक्टर साब भन्ने अनुरोध आउँथ्यो। गुह्य कुरा पछि थाहा भयो, फार्मेसीले त्यो औषधि ११ वटा किन्दा ९ वटा सित्तैमा र त्यो ११ वटाको मूल्यको पनि ४० प्रतिशत बोनस पाउने रहेछ। कस्तो गुणस्तरको औषधि थियो होला त्यो? अचम्म लाग्छ! आजसम्म मैले त्यो औषधि फेरि लेखेको छैन। नेपालको पत्रिकामा जेनेरिक नाममा औषधि लेख्ने वकालत भएको पाइन्छ। तर मलाइ उदेक लाग्छ, गुणस्तर नियन्त्रण हुँदै नभएको हाम्रो देशमा जेनेरिक नाममा औषधि लेख्नु भनेको औषधिको गुणस्तर छान्ने जिम्मा डाक्टरले औषधि पसले व्यापारीलाई दिनु हो। सबै औषधिमा कमिसन नभए पनि औषधिमा कमिसन नै छैन भनेको होइन। डाक्टरले खाने दारुपानी औषधि कम्पनीले नै दिएका होलान् तापनि बिरामी निको नभए बिरामीले डाक्टरलाई समाउँछ। ब्रान्डको बीचमा नै सही, डाक्टरलाई गुणस्तरीय औषधि छान्ने बाध्यता छ। तर व्यापारीले ब्रान्ड छान्न पाएमा धेरै बोनस छोडेर गुणस्तरीय औषधि बेच्ला र! राज्यले एकै औषधिको गुणस्तर र मूल्य समान राखे त कुरै सकियो नि हैन!महाराजगन्जको एउटा अस्पतालमा इन्टर्न्सिप गर्दादेखि अहिलेसम्मको प्राक्टिसमा सधैंजसो सडक दुर्घटनाका अनेकौं बिरामी हेर्नुपर्छ। आश्चर्य लाग्ने कुरा के भने ती सबै केसमा एकखालको समरुपता छ। अर्काको गाडी वा बाइकले हानेको बिरामीको आफन्तको सधैं एकै अनुरोध हुन्छ, ।।।डाक्टर साब, जति पैसा खर्च भए पनि सिटी स्क्यान, एमआरआई जस्ता सबै जाँच होस्। केही नछुटोस, बरु एक महिना आइसियूमा राखिदिनु।’ यसको अर्थ, अर्काले तिर्ने त हो, मोटो रकम उडाइदिनु है! त्यसको ठिक अर्को पाटो, आफै लडेर आयो भने चाहिँ, ।।।डाक्टर साब, खासै दुख्या छैन, सामान्य एक्स रे पनि पर्ला र? त्यतिकै औषधि लेखे हुँदैन?’ हामी जुन समाजको दुहाई दिन्छौ, अधिकांश पात्रको सही चरित्र यस्ता दुर्घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ। जुन डाक्टरले सिटी स्क्यान आवश्यक छैन भन्छ, उसको अगाडि औंला तेर्सिन्छ, ’भोलि केही भयो भने तपाईंले जिम्मा लिने हो?’ डाक्टरको विवेकमा गलत मनसायले तेर्स्याइएको यस्तो प्रश्नको चक्रव्यहूले आवश्यकरअनावश्यक परीक्षण जाँचको ठेलीमा चढाएको छ। यसको प्रत्यक्षरपरोक्ष मूल्य हाम्रै समाजले भोगिरहेको छ।दुर्गमको नियतिनेपालको दुर्गममा खटिएका डाक्टरलाई सोधे हुन्छ, त्यहाँ प्रशासनिक सुस्तता, जालझेल र खुट्टा तान्नेबाहेक केही छैन। त्यहाँका जनताले असम्भव सेवा पाइरहेका छन् त केही सन्की, पागल डाक्टरहरुको कारणले। जो जस्ता प्रतिकूलता झेलेर पनि हत्केलामा मुटु राखेर असामान्य लाग्ने शल्यक्रिया आदि गरिरहेका छन्। नमिठा दृश्यहरु आउँछन , यसै सम्बन्धमा पनि । सुदूरपश्चिमको एक दुर्गम अस्पतालमा आन्द्रा फुटेको बिरामी आउँछन्। रिफर हुने सामर्थ्य नभएको गरिब परिवारले रोएर अनुनय गर्छ। डाक्टरले शल्यक्रिया गर्छन्, अथक प्रयासको बावजुद दुई दिनमा संक्रमणले गर्दा बिरामीको मृत्यु हुन्छ। बिरामीलाई रगत चाहिँदा आउन आवश्यक नठानेको गाउँले ठुटेनेता आएर बोल्छन्, ।।।डाक्टरले लापरबाही गरेर मार्यो, नसक्ने भए किन रिफर नगरेको? हामी हेलिकप्टरमा उडाएर काठमाडौँ त के परे दिल्ली, अमेरिका लैजाने थियौं।’पत्रिकामा समाचार आउँछ– ’डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु।’ डाक्टर पिटिन्छन्, जिल्ला छोड्न बाध्य हुन्छन्। अर्को जिल्लामा कार्यवाहक सम्हालेपछि त्यहाँ बच्चा जन्माउन नसकेकी महिलालाई रिफर गर्छन्, अनि फेरी झगडा हुन्छ। पत्रिकाले छाप्छ– ।।।सक्ने बिरामीलाई कमिसनको लोभमा रिफर गर्यो।’ अझ रमाइलो कुरो छ।मास्टर सकिएपछि अस्पतालमा काम गर्दा एक व्यापारीसँग भेट हुन्छ, त्यहीँ चिनजान हुन्छ। अलिपछि म उनको पसलमा जान्छु। उनले फ्यान्सी(फ्यान्सी सामान किन्न सल्लाह दिन्छन्। म पनि किनिदिन्छु। पछि पो थाहा हुन्छ, अरु पसलभन्दा ज्यादा मुर्गा बनाएछन् मलाई। पछि उनको भाइको एपेन्डिक्सको अप्रेशन गर्नुपर्ने बेला उही महानुभाव टक्क देखापर्छन् र अनुरोध गर्छन्, ।।।डाक्साब पूरै छुटमा अप्रेशन पर्नुपर्यो।’उनको सोझो आशय, पसल लगानी हो, दोहोर्याएर नाफा खान मिल्ने वा खानैपर्ने। अनि मेरो मेहनत र लगानी भनेको आममानिसको स्वास्थ्यको अधिकार वा समाजसेवा मात्र हो। मेरो पेसालाई केवल सबैले समाजसेवा मात्र ठानिदिएको भए उनले पनि मलाई सित्तैमा समान दिनुपर्ने हो। मेरो सित्तैको गाडी हुनुपर्ने हो। त्यसमा पेट्रोलपम्पले त्यसै पेट्रोल हालिदिनुपर्ने हो। सेन्ट जेभिर्यसले मेरी छोरी सित्तै पढाईदिनुपर्ने । डाक्टर भएकैले जहाँ पनि ज्यादा मूल्य चुकाउनुपर्ने? अनि समाजको आशा चाहिँ सदैव समाजको सेवा गर्नुपर्ने?डोटी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा डाक्टर कुटिए। इमर्जेन्सीबाहेक बन्द गर्ने आह्वान भयो। अनि वरिष्ठ उपभोक्ताकर्मीले टिभीमा अत्यावश्यक सेवाको गफ चुट्न थाले। मैले सोचेँ, डाक्टरको बाँच्न पाउने अधिकार अति आवश्यक होइन रहेछ। अप्रेशन गरेको तीन दिनमा एक जना मेरो बिरामी घाउ सफा गराउन ओपिडीमा आए। मेरो सधैंको त्यही प्रश्न, ’खाना बार्नुभएको त छैन नि?’ उनको उत्तर, ’जाउलो मात्र खाएको छु।’ ’अन्डा, माछा, मासु, आलु सबै खाने भन्या होइन त?’’भन्या त हो, तर मैले नखाएको।’ ’किन नि?’ मेरो प्रश्न।उनको उत्तर सुनेर म पागल मात्र हुन सकिनँ। ’डाक्टरले आलु, मासु खाऊ भनेर भन्छन रे, अनि घाउ पाक्छ। पाकेपछि डाक्टरकोमा धाइरहनुपर्छ, अनि डाक्टरको आम्दानी बढ्छ रे।’यो अन्धविश्वास हो कि के होला? उनको यो भनाइलाई कसरी व्याख्या गर्ने? मैले आजसम्म सकेको छैन।ग्यारेन्टीको आतंकएमडी सकेर सिनियर दाजुले एक प्राइभेट अस्पतालमा बिरामी हेर्न थाल्नुभयो। म त्यहीँ मेडिकल अफिसर थिएँ। एक जना पक्षाघात भएको बिरामी आइसियुमा भर्ना हुन आइपुगे। १२(१४ दिनमा उनी डिस्चार्ज भए। सवा दुई लाखको बिल आयो। बिरामीको आफन्त रिसाउँदै ती डाक्टर दाइलाई गाली गर्न थाले। ’सवा दुई लाखबाट टन्न आयो नि दाइ, हैन?’ भनेर सोधेँ। दाइले हिसाब बुझाए, १४ दिनको बिहान बेलुका राउन्डको २ सयका दरले २८ सय। दाइको अनुहारमा चमक थिएन, बिरामीको आफन्त पनि रिसाए। किनभने उनको मनमा लागेको थियो, सबै पैसा डाक्टरले खायो भनेर। ७० लाख लिएर एमबिबिएस पढाउने मेडिकल कलेजले पढाइसकेपछि आफ्नै अस्पतालमा मासिक २० हजार तलबको अफर गर्छ। तैपनि समाज डाक्टरलाई पैसावाल नै देख्छ। क्या भाग्य होला!आजकाल एउटा तितो शब्द निकै प्रचलित छ, ग्यारेन्टी। सबै डाक्टर यो शब्दबाट आतंकित छन्। ’डाक्साब, ग्यारेन्टी।।। ठिक हुन्छ होइन त?’हाम्रो ज्ञान, विवेक र शिक्षामा यो ग्यारेन्टी कतै पढिएन। त्यसैले सुन्दै अचम्म लाग्छ। जानेको र भएको सिपको आधारमा बिरामीलाई सकेसम्म सहयोग गर्छु भन्ने मात्र हाम्रो अधिकार हो। यही कुरा सम्झाउन खोज्दा बिरामीका आफन्तले भन्छन्, ’ग्यारेन्टी नभए हामी ठूलो ठाउँमा लैजान्छौं।’ ग्यारेन्टीले केवल एक समूहलाई फाइदा गरेको छ। ग्यारेन्टीका साथ पाइल्स, फिस्टुला, जन्डिसवाला ठगहरुलाई। बिरामीको त अनावश्यक रिफर भएर पैसा, स्रोत र ज्यानसमेत जाने गरेको छ। रिफर गर्न नेपाको सवालमा कम्तीको ६ घन्टा समय बर्बाद हुन्छ। उक्त अवधिमा विष सेवन गरेका वा टाउकोमा चोट लागेका बिरामीको त निधन नै भइसक्ने सम्भावना हुन्छ।इमर्जेन्सीसँग अर्को घटना पनि छ।एक अधबैंसे जस्ता मानिस कराइरहेका छन्, ’बिरामी ल्याएको यत्रोबेर भयो, मेरो बच्चालाई सन्चो भएन ।’ मैले उनको कागज झिकेर हेरेँ, अर्कै विभागको रहेछ। ल्याएको आधा घन्टा भएको रहेछ। रोग थियो, सिकिस्त निमोनिया। रगत जाँच गरेको रिपोर्ट नै आएको थिएन। बच्चालाई ज्वरो आएको एक हप्ता भएको रहेछ। सिकिस्त भएको तीन दिन। के सम्झाउने के नसम्झाउने, म अक्क न बक्क भएँ। अर्की एक महिला छिन् मेरो चिनजानको। खुट्टाको नसा सड्कियो भनेर न्युरो सर्जनकहाँ गइछन् तर सर्जनले हेर्न मानेनन् भनेर ती महिला रिसाइन्। जबकि न्युरो सर्जनले यो हाडजोर्नीको केश हो भनेर अर्कै डाक्टरकहाँ पठाएका रहेछन्। उनले काठमाडौँका सबै न्युरो सर्जरी पसल चहारेर अन्त्यमा हाडजोर्नीकै डाक्टरबाट औषधि खाइन् र जाती पनि भइन्। यही घटनाले जनाउँछ, डाक्टर ब्रान्ड चहार्ने पनि ठूलो समुदाय छ हाम्रो देशमा।महामानव होइनन् डाक्टरहाम्रो समाजमा चिकित्सा क्षेत्र काल्पनिक देवत्वको फिलोसोफीबाट पेसाको रुपमा स्थापित हुँदै गरेको पेसा हो। सबै पेसामा समाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ। समाज निरपेक्ष राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। चिकित्सा पेसामा पनि समाजकै प्रतिबिम्ब देखिने हो, राम्रो वा नराम्रो। जब मुटुको ढुकढुकी बढेर स्वास रोकिने बेलामा मृत्युको आहतको आभास हुन्छ, त्यो बेला मान्छेले (त्यो स्वयं डाक्टर नै किन नहोस) उच्चारण गर्ने शब्द अस्पताल नै हो। मृत्यु र यमराजको बीचमा पहरेदार भएर उभिने डाक्टर नै हो। आजको मितिसम्म एक डाक्टरले छातीमा हात राखेर भन्दा, बिरामीको पीडा देखेर झट्ट मनमा आउने पहिलो सोचाइ उपचार र बिरामीको जीवन नै हो। फाइदा कहीँकतै हुँदै होइन।जसरी असललाई मण्डप र खराबलाई जेलको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ, चिकित्सा लगायत हरेक पेसामा त्यो आवश्यक छ। तर समग्र पेसालाई मन पर्दा देवत्वकरण वा चित्त नबुझ्दा दानवीकरण गरिनु हुँदैन। डाक्टर विशेष शिक्षा र सिप भएको मानव नै हो तर महामानव होइन। सबैको दिमागको एउटा भूल वा कमजोरी के भने, जुन घटना आफ्नो दिमागले सुझाउन सक्दैन वा चित्त बुझ्दैन, त्यसलाई अर्काको गल्तीको रुपमा बुझिदिने र प्रस्तुत गरिदिने प्रवृत्ति छ। एउटा भनाइ नै छ ( There are three sides of an arguement, my side, your side and the right side )